Global Voices teny Malagasy » Honduras: Horohoron-tany mahery nanetsiketsika ny firenena · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 31 Mey 2009 8:11 GMT 1	 · Mpanoratra Leonidas Mejia Nandika avylavitra
Sokajy: Amerika Latina, Honduras, Voina
Nifoha aloha be tokoa i Honduras ny marainan'ny 28 Mey noho ny horohorontany mirefy ‘7.1 tamin'ny maridrefy Richter’  nanetsiketsika ny firenena. 130 kilometatra tany avaratry ny tanànan'i La Ceiba ny foibeny, tany amin'ny morontsiraky ny ranomasim-be Atlantika. Tamin'ny 2:24 maraina, ora tany an-toerana, nanery ireo mponina hivoaka ny tranony tanatin'ny haizina ny horohorontany mba ho hitady toerana azo antoka. Dimy no voamarina fa maty , maro ny naratra, ary hita miandalana ireo fahasimban'ny foto-drafitrasa eto amin'ny firenena toy ny trano maro, tetezana ary làlana.
Ireo ‘Microblogging platforms’ toy ny Blipea  sy Twitter  no voalohany nitatitra ny horohorontany avy amin'ny mpampiasa azy ireo any San Pedro Sula, Tegucigalpa ary La Ceiba. Maro no nitatitra ny zava-misy manodidina azy ireo amin'ny fampiasàna ny teny fototra #temblorHN (horohorontanyHN).
Manoratra  i Yamil Gonzalez @yamilg :
Niresaka tamin'ny nenitoako monina any La Ceiba aho ary niteny izy fa nahery ilay izy ary natahotra mafy ry zareo, nianjera tamin'ny tany daholo ireo haingon-trano sy ny sisa #temblor HN
Nanoratra  i Roberto @roberto :
Naheno ny ‘armoire’ nihozongozona aho ary avy hatrany dia nihazakazaka nivoaka tany an-dàlana
Nanoratra  Jagbolanos @jagbolanos :
Mifoha aho ary miandry sao dia mbola misy tohiny manaraka
Tsy afaka nanao fanovana ara-potoana teo no ho eo ny blaoginy ny sasany tamin'ireo mpitoraka blaogy Hondoriana noho ny fahatapahan'ny herinaratra sy ny aterineto tany amin'ny faritra nisy azy ireo. Na izany aza, anisan'ireo voalohany nanome vaovao momba ilay horohorontany i Janpedrano Blog [es] tamin'ny nahazoany fanampim-baovao avy amin'ireo namany sy ny fianakaviany. Naharay antso an-tariby avy amin'ny rahalahiny izy:
Nandritra ny niresahako taminy tamin ‘ny antso an-tariby, tahaka ny hazonoely ny (MSN) Messenger-ko noho ny fahatongavan'ny hafatra tsy miato avy amin'ireo tapaka sy namako any San Pedro Sula izay mampahafantatra ahy ny zava-mitranga. Na ny namako iray avy any Switzerland aza dia nandefa hafatra tamiko manontany raha nanana vaovao momba ny zava-misy aho. Ny teny tena nanjaka tao anatin'ireny hafatra ireny dia ny hoe “mampivarahontsana” satria tena nanetsiketsika ny firenena ilay izy ary tsy mbola nisy nahita tahaka ity ny ankamaroan'ny olona. Monina any Roatán ny reniko ary niantso azy aho mba hanontany ny momba azy, ary ankoatra ny tahotra dia tsy nisy na inona na inona.
Nanome fanampim-baovao koa izy nandritra ny tontolo andro ka anisan'izany ny firodanan'ny Tetezan'ny Demokrasia, iray amin'ireo tetezana lehibe any an-toerana [es] .
Tara i La Gringa's Blogicito tamin'ny fitaterana ireo heviny  noho ny tsy fahampian'ny herinaratra, nefa nanoratra izy tao aoriana fa ity no horohorontany voalohany niainany  hatramin'izay nonenany tany Honduras.
Born in Honduras  (Teraka tao Honduras) sy ny dikanteny amin'ny espanola-ny Nacer en Honduras [es]  dia nanome rohy mankany amin'ny gazety any an-toerana. Ho fanampin'izany, Interartix [es] dia nizara sarin-tanin'ny foiben'ny horohorontany sy ny fampandrenesana tsunami  izay nampitaina, saingy notsoahina taty aoriana.
Niady mafy ny hijanonana tsy tapaka eo amin'ny sehatry ny aterineto ireo vohikala maro isan-karazan'ireo gazetim-pirenena noho izy ireo nahazo mpitsidika maro dia maro, indrindra fa ny avy any ivelany, Etazonia sy Espana, izay naka vaovao momba ireo tapaka sy namana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2009/05/31/2432/
 7.1 tamin'ny maridrefy Richter’: http://earthquake.usgs.gov/eqcenter/pager/events/us/2009heak/index.html
 ny firodanan'ny Tetezan'ny Demokrasia, iray amin'ireo tetezana lehibe any an-toerana [es]: http://janpedrano.blogspot.com/2009/05/cayo-el-puente-la-democracia-en-el.html
 fitaterana ireo heviny: http://lagringasblogicito.blogspot.com/2009/05/terremoto-71-earthquake-in-honduras.html
 ity no horohorontany voalohany niainany: http://lagringasblogicito.blogspot.com/2009/05/earthquake-first-time-earth-moved-for.html
 nizara sarin-tanin'ny foiben'ny horohorontany sy ny fampandrenesana tsunami: http://interartix.com/2009/05/28/terremoto-sacude-honduras/terremoto-en-honduras